दर्शनका मूलभूत प्रश्न के हुन् ? (दर्शन परिचर्चा भाग–६) « Pariwartan Khabar
दर्शनका मूलभूत प्रश्न के हुन् ? (दर्शन परिचर्चा भाग–६)
दर्शनको अध्ययन गर्दा केही मूलभूत प्रश्नमा केन्द्रित भएर अध्ययन गरिन्छ । ती मुलभूत प्रश्नलाई दर्शनका मूल प्रश्न पनि भन्ने गरिन्छ ।
केही प्रश्नहरू छन्, जुन प्रश्नको उत्तर हरेक दर्शनहरूले आफ्नै तरिकाले दिने गरेका छन् । ती प्रश्न के हुन् भने पदार्थ र चेतनाको सम्बन्ध के हो ? अस्तित्व र चिन्तनको सम्बन्ध के हो ? यो जगत जान्न सकिने छ कि जान्नै नसकिने छ ? यसको बोध गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? यी प्रश्नलाई नै दर्शनका मूलभुत प्रश्न मानिन्छन् र यीनै प्रश्नमा हरेक दर्शन केन्द्रित हुन्छ । यी प्रश्नको अर्को पक्ष पनि छ । त्यो पक्ष भनेको चेतना र पदार्थको अन्तरसम्बन्ध के हो ? भन्दाखेरि कस्तो सम्बन्धको चर्चा हुन्छ भने पहिले के उत्पन्न भयो ? पदार्थ कि चेतना ? पदार्थ प्राथमिक हो की चेतना प्राथमिक हो ? अथवा चेतना पहिले अस्तित्वमा आयो कि पदार्थ पहिले अस्तित्वमा आयो ? भन्ने बहस छ ।
एकथरी दार्शनिकहरूले पहिले चैतन्य शक्ति उत्पत्ति भयो र त्यसले सारा विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्‍यो भन्छन् । चेतना वस्तुगत जतगभन्दा पहिले अस्तित्वमा आयो र त्यसले नै सृष्टि गर्यो भन्ने तर्क छ । अर्को भौतिक जगत पहिले अस्तित्वमा आयो र भौतिक जगत अन्तर्गत जीवको विकास भयो । जैव शरीरभन्दा बाहिर चेतनाको अस्तित्व छैन । जैव शरीर भनेको भौतिक शरीर हो । त्यसैकारण भौतिक पदार्थ पहिले अस्तित्वमा आयो र त्यसमा चेतनाको विकास भयो । चेतना भनेकै भौतिक पदार्थको एउटा विशेष गुण हो ।
पदार्थ र चेतनाको विकासबारे यी दुईखाले तर्कहरू रहेका छन् । त्यस्तै चिन्तन र अस्तित्वबीचको सम्बन्धकोे कुरा के हो भन्दा पहिले के सृष्टि भयो भौतिक अस्तित्व कि चिन्तन ? भन्ने सन्दर्भमा एकथरी दार्शनिकहरूले चिन्तन नै अगाडि पैदाभयो भन्छन् भने अर्काथरी दार्शनिकहरूले होइन पहिले मान्छे अस्तित्वमा आउँछ र त्यसपछि मानव शरीरको विकास हुँदै जादाँ मस्तिष्कको पनि विकास हुन्छ र बल्ल चिन्तन गर्न थाल्छ भन्ने तर्क राख्छन् । यसका आधारमा भौतिक शरीर पहिले र चिन्तन पछि भन्ने तर्क छ । त्यस्तैगरी संसारलाई बुझ्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्नेमा पनि दुईखाले नै मान्यता छन् । एउटा मान्यता छ यो त अवोधगम्य हो । यसमा हामीले कुनै पार लाउन सक्दैनौँ । यो बुझ्नै सकिदैन भन्ने मान्यता छ । अर्को प्रकृतिका नियमहरूलाई बुझ्न सकिन्छ र तिनीहरूलाई उपयोग गर्न पनि सकिन्छ र मानिसले गर्दै आएका पनि छन् भन्ने मान्यता छ ।
प्रारम्भिक कालमा केहीपनि गर्न नजान्ने मान्छे आज अत्याधुनिक खालका यन्त्रहरू बनाएर ब्रह्माण्डका अरु ग्रहहरूमा समेत जान खोजिरहेको छ । यो प्रकृतिको नियमलाई बुझेर नै हो । त्यसैले यो प्रकृतिलाई बुझ्नै नसकिने होइन भन्ने अर्को मान्यता रहेको छ । यसरी दर्शनका मूलभुत प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने दर्शनका दुई धारा बनेका छन् ।
दर्शनको प्रारम्भ कसरी भयो ? (दर्शन परिचर्चा भाग–२)
दर्शनका आधार के हुन् ? (दर्शन परिचर्चा भाग–३)
दर्शनले के काम गर्छ ? यो किन र यसको के महत्व छ ? (दर्शन परिचर्चा भाग–४)
दर्शनका विषयवस्तु के हुन् ? (दर्शन परिचर्चा भाग–५)
राष्ट्रसंघका ८६ कर्मचारी ‘कोरोना संक्रमित’
१६ चैत्र २०७६, काठमाडौं संयुक्त राष्ट्रसघंका विभिन्न देशमा खटिएका ८६ कर्मचारी कोभिड १९ (कोरोना भाइरस)बाट
कोरोना संक्रमण रोक्नेबारे कांग्रेसले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्ने
१५ चैत्र २०७६, काठमाडौं कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण, जोखिम न्यूनीकरण तथा उपचारका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी
कामपा १५ मा कोरोना किट्नाशक औषधि छरियो
१५ चैत्र २०७६, काठमाडौं काठमाडौं महानगरपालिका १५को विभिन्न ठाउँहरुमा कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) किटनाशक औषधि
गुणस्तरहीन भन्दै स्पेनले फिर्ता गर्यो, चीनले दिएको परीक्षण किट्स
१५ चैत्र २०७६, काठमाडौं स्पेनले तीस प्रतिशत मात्रै पहिचान गर्न सक्ने र गुणस्तरहीन भएको भन्दै
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश नेताद्वारा बूढानीलकण्ठका पार्टी कार्यकर्तालाई अपिल
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ मा ‘घरदैलो खाद्यन्न सामाग्री अभियान’ हुँदै (विज्ञप्ती सहित)
कोरोना भाइरस र बच्ने उपाय
कोभिड १९: संक्रमणबाट कसरी जोगिने, लक्षण देखिए के गर्ने ? [चित्रात्मक जानकारी]